विराटनगर । कोभिड– १९ का संक्रमितको उपचारमा ‘रेमडिसिभिर’ इन्जेक्सनको प्रयोग हुन थालेपछि भारतदेखि नेपालमा यसको अधिक मात्रमा तस्करी भइरहेको पाइएको छ । सरकारले सीमित आयातकर्तालाई मात्र अनुमति दिएको र संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा माग बढेकोले तस्करीको बाटोबाट रेमडिसिभिर आएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रभाबकारी नरहेको बताएपनि नेपालमा संक्रमितको उपचारमा यो प्रभाबकारी देखिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, बैधानिक रुपमा यसको आयात पूर्ण रुपमा खुल्ला नगरिएको कारण भारतबाट तस्करी गरि ल्याएर तीन गुणा बढी मूल्यमा यसको बेचबिखन गर्ने धन्दा मौलाएको छ ।
भारतमा प्रतिभाइल भारू २ हजार ८ सयदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ गर्ने यो इन्जेक्सन नेपालमा १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । अहिले नेपालमा कडा लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि यसको माग पनि बढेको छ । मंसिर ८ मा मोरङ प्रहरीले विराटनगर–१३ सैनक टोलका ३६ वर्षीय नरेश यादवको घरदेखि तस्करी गरे ल्याएको औषधी बरामद गर्दा १० भाइल रेमडिसिभिर पनि फेला परेको थियो ।
औषधिको तस्करी गर्नेहरुले रेमडिसिभिरको तस्करी गर्न थालेको यो प्रकरणबाट देखिएको छ । प्रहरीले यादवको घरबाट तस्करी गरि ल्याएको रेमडिसिभिरसहित औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका ‘डाकसिसाइवर्गलिन र मिथाइल प्रिडनीसोलोन इन्जेकेसन’ लगायतका अन्य विभिन्न नाम गरेको चार कार्टुन औषधी बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गरेको दुवै इन्जेक्सन औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता छैन ।
अहिले नेपालमा कम्पनी अनुसार फरक–फरक दुई मूल्य भएको रेमडिसिभिर इन्जिेक्सन आउने गरेको छ । भारु २ हजार ८ सय र ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा यो इन्जेक्सन नेपालमा ल्याउँदा १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री हुने गरेको छ । यसको तस्करी गरि कालोबजारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही समूहको संलग्न हुने गरेको छ ।
तस्करको गिरोहसँग मिलेर रेमडिसिभिर इन्जेक्सनसहित अन्य प्रतिबन्धित औषधीहरू विराटनगर ल्याएपछि विभिन्न क्षेत्रमा पठाउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ‘यादवले तस्करी गरि ल्याएको औषधी स्वास्थ्य क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूको समूह मिलेर मगाएको प्रराम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट खुलेको छ’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने, ‘विभागमा दर्ता नभएका औषधीहरू तस्करी गरि ल्याउने गिरोहको पहिचान भएकोले पक्राउ गर्न लागि परेका छौं ।’
तस्करीमा संलग्न थप व्यक्ति पक्राउ परिनसकेकोले विभागले तस्करी गरि औषधी मगाउने व्यक्तिको नाम गोप्य राखेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार रेमडेसिभिरको तस्करीमा विराटनगरका केही ठूला औषधि व्यवसायी, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार व्यक्तिको संलग्नता छ ।
‘सिकिस्त कोरोना संक्रमितलाई रेमडिसिभिर सिफारिस भएपछि कोरोना अस्पतालबाट परिवारलाई फोनमार्फत जानकारी गराइन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक संक्रमितका आफन्तले भने, ‘तपाइको विरामीलाई इन्जेक्सन चलाउनुपर्दछ । चाँडै जोहो गर्नुहोला । फार्मेशी र स्वास्थ्यकर्मीले भनेको मानिसलाई सम्पर्क गर्दा प्रतिभाइलको १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म भन्ने गर्दछन् ।’
‘महामारीका बेला पैसाको मुख कसले हेर्छ ?, संक्रमितका एक जना आफन्तले भने, ‘यस्तो बेला पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यो हदसम्म कालोबजारी ठीक हैन, पैसा भएर मैले पो तिर्न सकें, पैसा नहुनेले चाहिँ यति महँगोमा औषधि कसरी खरिद गर्न सक्छन् ? ।’
यसरी भित्रिन्छ तस्करीको औषधी
विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले भण्डान गरि राखिएको ठाउँबाट रेमडिसिभिरसहित अन्य विभिन्न तस्करीको औषधी बरामद गरेको थियो । यादवले भारतदेखि विराटनगरसम्म ल्याउन निक्कै जुक्ति लगाएका थिए । तस्करीको औषधी ल्याउन यादवले ट्याक्टर प्रयोग गरेका थिए ।
‘खाली ट्याक्टरको मुनी औषधी र माथिबाट पराल राखेर चोरबाटो हुँदै तस्करीको औषधी यादवको घरमा पु¥याइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यादवले औषधी घर ल्याएको २ घण्टा बित्न नपाउँदै मोरङ प्रहरीबाट खटिएको सिआरभीको टोलीले औषधी बरामद गरेको हो ।’ मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार विशेष सूचनाको आधारमा तस्करीको औषधी भण्डारण गरिएको ठाउँबाट बरामद भएको हो ।
प्रहरीले बरामद गरेको औषधी र पक्राउ गरेको यादवलाई थप आवश्यक कारवाहीको लागि औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरलाई बुझाएको छ । विभागले ९ मंसिरमा मोरङ अदालतमा उनीमाथि ५ दिनको म्याद थप गरि अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
आइतबार, १४ मंसिर, २०७७, बिहानको ०८:२० बजे
शान्ति समाजको सभापतिमा पोखरेल
विराटनगर । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज मोरङको सभापतिमा भेषराज पोखरेल चयन हुनु भएको छ । विराटनगरमा शनिबार भएको समाजको साधारणसभाले पोखरेलको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको उपसभापतिमा धन थापा कार्की, सचिवमा अशोक लामा, सहसचिवमा सीताराम
ओलीको गृहनगरमा ‘रेल’ !
दमक । सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा प्रतिकात्मक रेलसहित प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेस दमक नगर समितिको आयोजनामा भएको विरोध ¥यालीमा प्रधानमन्त्रीले रेल र पानी जहाज ल्याउने ठूला–ठूला कुरा गरेर चुनाव जितेको तर अहिले
अनधिकृत सदस्यताका कारण चिकित्सकहरुको निर्वाचन विवादमा
विराटनगर । नेपाल चिकित्सक संघ कोशी अञ्चल शाखाको निर्वाचन प्रकृयानै विवादमा परेको छ । शाखाको चुनाव प्रभावित गर्ने उद्देश्यले अनधिकृत सदस्यहरुको प्रवेश गराइएपछि निर्वाचन विवादमा परेको हो । विधान बमोजिम कोशी अञ्चल शाखाको सदस्य हुन नपाउने मापदण्डभित्रका चिकित्सकहरुलाई सदस्यता दिएर
प्रधानमन्त्रीले फाइल चोरी गरेः नेता पाण्डे
मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेको फाइल चोरी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । मोरङको बेलबारीमा अखिल नेपाल महिला संघ मोरङले आज गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले यस्तो आरोप लगाउनु
मुख्यमन्त्री राईले मोडल शेर्पासँग विवाह गर्दै
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विवाह गर्नुहुने भएको छ । ५१ वर्षीय राईले आफूभन्दा २८ वर्ष कम उमेरकी संखुवासभा घर भएकी २२ वर्षीया ज्याङमु शेर्पासँग विवाह गर्न लाग्नुभएको हो । राईको माघ ११ गते काठमाडौंमा विवाह हुने
कर्णसहित ८ पत्रकार सम्मानित
विराटनगर । हाम्रोमत दैनिकका सहकर्मी कर्णसहित सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील विराटनगरका ८ पत्रकारहरुलाई सम्मान गरिएको छ । शनिबार विराटनगर–१५ स्थित रानी मकर्जमा लियो डिस्ट्रिक काउन्सिल ३२५ ए वन द्धारा आयोजित शैक्षिक सामाग्री वितरण कार्यक्रमका बिच उनीहरुलाई कोरोना योद्धा सम्मान पत्र–२०२१ ले
प्रदेश नं. १ मा सौन्दर्य प्रतियोगिता “मिस्टर एण्ड मिस तराई २०२१” हुने
मुख्यमन्त्रीसहित ८ सांसदलाई निलम्बनको घोषणा
नेकपा प्रदेश १ को अध्यक्षमा बस्नेत, कार्की र राईद्वय सह–इन्चार्ज
भारतबाट घुँगी पनि तस्करी
अविश्वासको प्रस्ताव विनाअबरोध अघि बढ्ने